Ndụmọdụ ịgagharị na Thailand: ihe ị ga-eme na ihe ị gaghị eme | Akụkọ Njem
Thailand na-anabata ihe karịrị nde mmadụ iri abụọ na isii kwa afọ site na mma nke ọdịdị ala ya, ịdị mma nke ndị obodo ya na nri ya dị ụtọ. Obodo ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia bụ ebe kachasị amasị ndị njem ahụ na-achọ ịhapụ onwe ha na osimiri paradaịs na ndị na-atụgharị uche ịtụgharị uche n'okirikiri ala n'oge ezumike ha. Maka ndị na-achọ ibi ndụ ọhụụ na ugwu, na-ezute mmụọ nke mmụọ ma ọ bụ nwee obi ụtọ nke obodo ahụ.
Ọ bụrụ n’ị nwebeghị obi ụtọ ịmara Thailand, ezumike ezumike a nwere ike ịbụ oge zuru oke iji gaa ebe ahụ. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji nwee obi ụtọ na ya.
Njikọ nke ọnụ ala dị ọnụ ala, gastronomy bara ụba, ụsọ mmiri nrọ na ile ọbịa nke ndị bi na ya emeela ka Thailand bụrụ ezigbo mma maka ndị njem Spain. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mba na-esekarị okwu, a ga-atụle usoro nke aro mgbe ị na-ahazi ụzọ.
1 Na-eme atụmatụ njem na Thailand
2 Ebe ịnọ na Thailand
3 Akwụkwọ achọrọ
4 Ọgwụ mgbochi na Thailand
5 Insurance mkpuchi
6 Transportgbọ njem na Thailand
7 Ego na Thailand
8 Ndebanye aha ndị njem
Na-eme atụmatụ njem na Thailand
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịpụta ihe, ọ dị mkpa ịhazi njem gị tupu oge eruo iji zere ihe omume na-atụghị anya ya. Tupu ịzụrụ tiketi ụgbọ elu, ajụjụ kacha mkpa bụ mgbe kacha mma iji gaa Thailand. Azịza ya sitere na Nọvemba ruo Febụwarị, mgbe oge ọnọdụ ọnọdụ ọnọdụ na-ewere ọnọdụ na ọnọdụ okpomọkụ dị gburugburu 25ºC na nkezi. Site na June rue Ọktọba ọ bụ oge udu mmiri ka iru mmiri ahụ rịa ruo 80%, si otú a na-abawanye mmetụta ọkụ ahụ.
Ozugbo anyị matara oge n'afọ anyị ga-aga mba ahụ, ọ bụ oge ịhọrọ ụgbọ elu. Enweghị ụgbọ elu si Spain kpọmkwem mana enwere njikọ dị iche iche maka euro 500 ma ọ bụ obere. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịchọ ụgbọ elu nwere obere nkwụsị ebe ọ bụ na igbu oge nwere ike ịpụta ọnwụ nke na-esote, nke ga-abụ nsogbu
Ebe ịnọ na Thailand
Thailand na-enye ndị njem nleta ohere na-enweghị njedebe mgbe a bịara n'ịchọta ebe obibiAbụọ maka ndị chọrọ ihi ụra na họtel na ndị họọrọ ụlọ mbikọ ma ọ bụ ụlọ mbikọ. Ọ ga-adị mfe ịchọta ebe dịka atụmanya gị na mmefu ego gị.
Banyere akwụkwọ, Ndị Spain anaghị achọ visa ịbanye n'ihi ya, ọ ga-ezuru iji gosipụta paspọtụ ziri ezi ma ọ dịkarịa ala ọnwa isii.
Tupu ịga Thailand, ọ dị mkpa ịnyocha akwụkwọ niile wee zigara email gị n'ihi na, ọ bụrụ na ị ga-ezu ohi, anyị ga-enwe ike ịnweta otu ozugbo. N'echiche a, ọ dịkwa mma ịnweta akwụkwọ ikike ngafe nke akwụkwọ.
Ọgwụ mgbochi na Thailand
Enweghị iwu ịgba ọgwụ mgbochi, ma Ministri nke Ofesi na-akwado nke ịba ọcha n'anya A na B, oria nkpụrụ, encephalitis ndị Japan, tetanus na BCG (ụkwara nta). Dị ka okwu a na-ekwu, mgbochi dị mma karịa ọgwụgwọ.
Ọ dị mkpa iburu mkpuchi mkpuchi tupu ịhapụ. Agbanyeghị na ụlọ ọgwụ Thai dị mma ma nwee ndị ọrụ ahụike ruru eru, ọkachasị na Bangkok, ụgwọ ndị ahụ dị elu nke ukwuu, ha enweghị ọrụ ịgwọ ndị mba ọzọ ma ọ bụrụ na mkpuchi anaghị ekpuchi ha nke ọma ma ọ bụ nwee ike ịkwado ụgwọ maka mmefu ahụ n'ọdịnihu ndụmọdụ ahụ ma ọ bụ nlekọta ahụike enyere.
Mgbe ị na-ahọrọ mkpuchi njem, ị ga-atụle ma họrọ nke nwere mkpuchi ahụike dị elu yana, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ya na mkpuchi mkpuchi pụrụ iche na njem.
Transportgbọ njem na Thailand
Mgbe ị rutere n’ọdụ ụgbọ elu, ọ kachasị mma iji tagzi iji nweta ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ ụlọ mbikọ ebe anyị ga-anọ. Tupu ị banye, ọ dị mkpa ịnakwere na ọnụahịa nke njem ahụ na onye ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ gwa ya ka ọ tọgharịa mita ahụ na efu.
Ugbo ala na ụgbọ oloko bara uru ịga ogologo oge. Na Thailand ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị iji ụgbọ ala emekọrịta ihe ebe ọ bụ na njem ahụ na-adịkarị ọnụ ala.
Ego na Thailand
Akwụkwọ Thai bụ baht. Agbanyeghị, a na-anabata euro ma ọ bụ dollar ebe niile. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iburu kaadị kredit na kaadị debit iji wepụ ego na ATM ma ọ bụ zụta ihe ọzọ.
N’ebe ndị mmadụ juru, dị ka ihe ncheta, ebe a na-ere ahịa ma ọ bụ n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè, anyị kwesịrị ilebara anya na gburugburu anyị ka anyị ghara ịbụ ndị aka n’akpa, dị ka a na-eme na mba niile.
Ndebanye aha ndị njem
Ministri nke Mba Ọzọ na-atụ aro ka gị na gị na-ebu nọmba mberede nke ndị nnọchi anya obodo ma deba aha gị n'akwụkwọ maka ndị njem maka ihe nwere ike ime.
Ọ dị mkpa iburu paspọtụ gị dịka onye uwe ojii Thai ọ bụla ma ọ bụ ikike ndị agha nwere ike ịrịọ ya n'oge ọ bụla.
Ebe ọ bụ na Thailand bụ mba na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, ọ ga-adị mma ka ị yikwasị uwe dị mfe (ọkacha mma linen ma ọ bụ owu) na agba ọkụ iji lụso anwụ na anwụnta ọgụ, yana akpụkpọ ụkwụ dị mma. Thailand bụ ebe mmụọ dị nke ukwuu, yabụ, kwesịrị iyi uwe kwesịrị ekwesị n'ụlọ arụsị. Enweghị okpu tankị ma ọ bụ sket na nịịka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Tailandia » Ndụmọdụ maka njem na Thailand: ihe ị ga-eme na ihe ị na-agaghị eme
Trinidad, ụlọ ihe ngosi nka nke Cuba nke dabara na ịhụnanya